एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय :- कसैलाई कारवाही र भेदभाव नगरिने, फर्केर आउन आ’ग्रह ! – Nepal Online Khabar
एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय :- कसैलाई कारवाही र भेदभाव नगरिने, फर्केर आउन आ’ग्रह !
भाद्र ८, २०७८ मंगलबार 154
काठमाडौं : नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले हालसम्म भएका गतिविधिका कारण कसैलाई पनि कुनै कारवाही र भेदभाव नगरिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार ललितपुरको च्यासलस्थित बसेको बैठकले कसैलाई भेदभाव र कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग रहनुहोस् स्वागत गरिने छ । विभाजनका सबै गतिविधि परित्याग गरेर आउनेलाई कुनै कारबाही र भेदभाव राखिने छैन ।’
उनले पार्टी एकता गर्न बनाइएको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय भएको बताएका छन् । यस्तै, बैठकले एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील हुने पनि प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।उनका अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता दिने लगायत प्रयोजनका निम्ति सात सदस्यीय कार्यदल पनि बनाइएको छ ।
कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरु विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन् ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले आगामी १० देखि १२ मंसिरमा दशौं महाधिवेशन र ४देखि ६ असोजमा विधान म’हाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि भएको बताएका छन् । यसका लागि पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारबाट अगाडि बढाइने निर्णय भएको छ ।
सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तभित्र गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार बैठकले भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा माधव नेपाल नेतृत्वमा दर्ता भएको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सहभागी नभएका नेपाल समूहका १० नेताहरु आजको स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी रहेका थिए । भोलि फेरि केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नेगरी आजको बैठक सकिएको छ ।
Prevमुलुकभर थप २५२५ जनामा को’रोना पुष्टि, ३५ जनाको मृ’त्यु !
Nextस्रोत नखुलेको ८५ लाख ५६ हजार रकमसहित तीन प’क्राउ !